Inona no antony manosika ny olona hahita fahombiazana, teolojia fototra, boky sy sarimihetsika mikasika ny antony manosika, ahoana no hahitana antony manosika ao anatiny?
Inona ny antony manosika sy ny fomba hanatsarana izany ho an'ny fahombiazana?
Manomboka amin'ny fahaterahana, ny zaza dia manana filana ara-batana sy ara-batana. Amin'ny ho avy, ny tanjona, ny tombontsoa ary ny faniriana dia voafaritra amin'ny tontolo iainana. Ny faniriana dia miova ho antony manosika ny olona hanao fihetsika na fananganana drafitra. Inona no fanentanana - amin'ity lahatsoratra ity.
Inona no antony manosika?
Izany dia zavatra maromaro mahatonga ny olona hiasa miaraka amin'ny tanjona kinendry. Ny hevitra momba ny motivation dia mianatra avy amin'ny sosiology, biolojia ary siansa politika. Ny fanoloran-tena dia manorina manodidina ny zavatra ilain'ny olona ary raha mikasa hanome fahafaham-po azy ireo izy, dia mihalehibe sy mitombo izy, mikisaka mankany amin'ny ambaratonga manaraka eo amin'ny ambaratonga ilaina. Ireo no loharanon'ny asan'ny olombelona. Izany dia mihatra amin'ny hetsika kognitika sy azo ampiharina.
Ny fanentanana ny olona amin'ny psikology
Ny fanoloran-tena amin'ny hetsika dia mifandray akaiky amin'ny fikasana, ny faniriana, ny tanjona. Ny antony manosika ny olona iray dia mahazo votoatiny amin'ny zavatra iray izay neken'ny hetsika natao, ary avy amin'ny filàna izay mahafa-po noho ny fahatanterahany. Ny filàna samihafa, sy ny fomba fampiharana azy, dia mety miteraka ny tolona amin'ny faniriana, ary eto ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny ambaran'ny fampandrosoana ny olona, ​​ny lanjany ny lanjany.
Ny antony sy ny fisaintsainana momba ny psikology
Ny zavatra ilain'ny olona dia fepetra ary ny finday. Ny filàna sy ny fanentanana dia mifamatotra akaiky. Ny voalohany dia manentana ny olona ho amin'ny asa, ary ny singa fototra dia foana ny antony. Mampirisika olona iray hanao izay hahafa-po ny zavatra ilainy izy. Ny antony sy ny antony manosika dia tsy zavatra mitovy. Ity farany dia fiarahan'ny hery anaty sy ivelany izay mamporisika ny olona hanao zavatra amin'ny fomba iray. Ny antony dia ny fananana azy manokana, izay miaraka amin'ny filàna, tanjona sy fikasana dia manentana sy manohana ny fitondran-tenan'ny olona.
Motivation sy fandrisihana
Ny faniriana maniry hanao zavatra, miaro amin'ny fanampiana avy any ivelany, dia mandrisika olona iray handroso sy hanatratra ny tanjony. Asehoy amin'izany ny asa fanentanana:
Fihetseham-po sy fanentanana
Ny traikefa ara-pihetseham-po dia ahafahan'ny olona iray manombana haingana ny fanjakana anatiny sy ny filàna nipoitra, ary mifanaraka amin'izany, mamolavola fomba fijery mety. Ao anatinà saina iray na toe-tsaina mahatsiaro saina izay mahatonga ny olona hanatanteraka hetsika sasany, ny hevitra momba ny antony manosika, ary ny fihetseham-po dia mifandray akaiky aminy. Mamela antsika hanombantombana ny halehiben'ny fahafaham-po amin'ny zavatra ilaina izy ireo ary koa ny fisehoan'ny vokatry ny fisainana.
Amin'ny fanatanterahana ny tanjona napetraky ny toe-javatra iainana ara-pihetseham-po. Ny fahatsiarovan-tena dia mametraka izany ary amin'ny manaraka dia mitranga izy ireo rehefa misy fanentanana anatiny mifanaraka aminy. Ny fihetseham-po dia teraka ary rehefa misy fiantraikany mahery vaika amin'ny asa, rehefa hita ny sakana amin'ny fahafaham-po ny faniriana. Na ahoana na ahoana, dia manosika olona iray hahomby izy ireo.
Motivation sy filàna
Ny asa tena nampiasaina dia A.Kh. Maslow dia psyôlôgy Amerikana, mpanorina ny psychologie humanist. Nino izy fa mifanentana ny antony manosika sy ny olombelona: ny voalohany dia mifototra amin'ny faharoa. Amin'ny ankapobeny dia ekena fa misy olona mivezivezy amin'ny ambaratonga avo kokoa rehefa mihaona ambany izy. Ny ivon'ny piramida dia ny filôziana ara-batana, mahatsiaro tena, ary ny ambony dia ny filàna ny filaminana, ny fitiavana ary ny fanekena, ny fanavaozana ny tena, ny fahatakarana, sns.
Ny fanentanana ho amin'ny fahombiazana, izay anisan'ny modely ambaratongam-pahefana, dia nahazoana fampiharana goavana teo amin'ny toekarena. Mandritra izany fotoana izany, ny filàna ara-batana dia karama, fialan-tsasatra, fialan-tsasatra. Ny fiarovana ny fikambanan'ny sendikà, ny tombony, ny fepetra ara-pahasalamana azo antoka. Avy eo dia tonga ny filàna ny fanajana, ny fanekena, ny fanehoana tena, ny fanatanterahana ny tenany, sns.
Nisy mpahay siansa maromaro nanangana foto-pinoana maro mifanohitra. Ny teoria amin'ny fanentanana dia manazava ny antony mahatonga ny olona sasany hifantoka bebe kokoa amin'ny fahatratrarana ny tanjona, ny hafa kosa dia kely kokoa. Ny manam-pahaizana sasany dia mino fa ny andraikitra lehibe indrindra amin'ny hetsika ataon'ny olona iray dia entin'ny rafitra anatiny, ny hafa kosa miankina amin'ny fanentanana avy amin'ny tontolo iainana. Ny hafa kosa miezaka mamantatra raha mahatratra io tanjona io ny tsirairay amin'ny alàlan'ny fanindrahindrana na tarihin'ny fahazarana. Indray mandeha i Maslow, M. Cleland, D.S. Adams et al.
Ny fanoloran-kevitra amin'ny hetsika dia mety ivelany sy anatiny. Amin'ny tranga voalohany, noho ny toe-javatra avy any ivelany, ary amin'ny faharoa - ny antony anaty. Ireo karazam-panentanana dia tafiditra ao anatin'ny hery mitondra fiara tsara tarehy sy ratsy: "Raha manao io asa io aho, dia handoa vola, na raha manao an'ity asa ity aho, dia tsy hananatra ahy ny lehibeny." Famporisihana maharitra ho an'ny asa dia mifototra amin'ny filàn'ny voajanahary - ny torimaso, ny hetaheta, ny hanoanana ary ny tsy fandriampahalemana dia mitaky fanohanana avy any ivelany - manasitrana ny aretina, mijanona ny fisotroana , sns.
Ahoana no hahitana antony manosika?
Eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, misy fotoana tsy tianao hanaovana na inona na inona. Ny tsy firaharahiana sy ny fanafihana faniriana dia tsy misy dikany ny fiainana. Ny fanentanana mahery vaika sy ny tsara indrindra dia mipoitra amin'ny toe-javatra izay tian'ny olona hahatanteraka zavatra iray. Azony antoka fa hahomby izy ary mahafantatra fa andraikiny ny tenany. Ny tsy fisian'ny zavatra iray dia mitarika ho amin'ny filalaovana fanentanana. Azonao atao ny mahita azy io raha mieritreritra ianao ao amin'ny antsipiriany kely indrindra amin'ny fanirianao, manohina ny fihetseham-po, maminavina tombony hafa.
Mba hampitomboana ny fatokisanao fa hitranga ny zava-drehetra, mila miomana amin'ny fahasarotana ianao: mahazo fahalalana vaovao, raha ilaina, dia hahita ireo izay liana sy hanampy. Ny hevitra sy ny maha-zava-dehibe ny antony manosika dia ny fanehoana ny fahaizanao sy ny talenta rehetra, mba hanaporofoana ny tenanao fa mendrika izany ianao. Raha tokony hiantso ny fiainana, dia mandany fotoana sy hery amin'ny tombontsoa.
Ireto misy torohevitra mahasoa:
Mametraha tanjona iray.
Makà fotoana fohy. Indraindray dia ilaina ny miala sasatra sy miala sasatra kely alohan'ny hivoahana amin'ny ady.
Mitadiava zavatra izay hanome aingam-panahy sy hanentanana ny fahombiazan'ny tanjona.
Ahoana no hampitomboana ny motivation?
Matetika dia mitranga izany fa tsy ampy ny faniriana iray. Tsy ampy ny fanosehana, aorian'izay dia hihodina ny dingana. Mitombo ny fanentanana ataon'ny tena manokana raha:
Ataovy ny dingana voalohany . Araka ny fantatrao, izy no sarotra indrindra. Te ho very maina ianao, aza mieritreritra ny fahasarotan'ny zavatra atao sy ny fotoana haharetany. Mila manomboka fotsiny ianao.
Mitadiava ilay olana ary hamaha izany . Mba hahafantaranao ny antony manosika sy ny fomba hanatsarana azy, dia mila mamantatra ny antony tsy mahatanteraka ny faniriana sy manafoana azy. Mianatra fiteny vahiny raha ilaina ny mifandray amin'ny mpiara-miasa vahiny.
Aza mampitaha ny tenanao amin'ny hafa, fa alao haingana . Amin'ny fiainana sy ny fanatanjahantena, ny matanjaka indrindra no handresy, saingy ny fahasamihafana sy ny fahaiza-manao ara-batana dia samy hafa.
Fihetseham-po amin'ny filalaovana
Ireo lohahevitra ireo dia azo jerena amin'ny sary hosodoko maro. Ireto ny sasany amin'izany:
"Knockin 'any an-danitra" . Ny sarimihetsika dia mahatonga anao hieritreritra ny dikan'ny fiainana, momba ny dikan'ny hoe olona iray amin'ny lalana mankany amin'ny tanjony. Ny fikolokoloana ny fahombiazana dia hita rehefa fantatry ny maherifo fa ny fiainana dia voafetra ary ny fahafatesana na ho ela na ho haingana dia hahatratra ny rehetra.
Ny "Green Mile" dia iray amin'ireo fananganana tsara indrindra amin'ny sinema. Ity sary ity dia mikasika ny famitahana sy ny famadihana, ny famindram-po ary ny fangorahana. Ao amin'ny kibony, mifamatotra ny firehetam-po sy ny tahotry ny maherifo, fa ny tsara kosa amin'ny farany dia mandresy ny ratsy.
"Slumdog Millionaire" . Ny hevitra momba ny antony manosika dia hita amin'ny sary feno. Ny zazalahy mahantra dia mandeha amin'ny lalana izay tsy misy olona maniry ary lasa olona tena izy, olona matanjaka sy matoky tena.
Boky momba ny antony manosika
Betsaka ny literatiora ahitana mpanoratra manome torohevitra momba ny fitadiavana sy ny fampitomboana ny antony manosika azy, ary manome ohatra avy amin'ny fiainana, mamaritra ny hiafaran'ireo olona nahomby tamin'ny fahafatesana rehetra. Anisan'izy ireo ny:
"Aoka ho dikan-teny tsara indrindra" avy amin'i D. Waldschmidt . Ao anatin'izany no ilazan'ny mpanoratra ny momba ny olona rehetra fanta-daza, izay, na dia teo aza ny olana sy ny tsy fahampiana, dia nanjary fitaovana hanaovana fitarihana sy fitsiriritana.
Ireo boky momba ny fanentanana dia ahitana ny "Atlant manitsy ny sorony" A. Rand . Nanoratra azy nandritra ny 12 taona ilay mpanoratra, nalaza tamin'ny fomba malaza ilay tetika ary nitondra ny eritreritra sy ny tenin'ny filozofa lehibe.
Ny antony manosika sy ny fomba hahafantarana ny tokony hatao sy ny toerana tokony hifindranao dia azo avy amin'ilay boky hoe "Azo atao ny zavatra rehetra! Sahy mino izany ... Manaova fanamarinana. " Aiken . Ao amin'ny kaontin'ny mpanoratra dia maherin'ny 120 ny fandaharam-pampianarana sy seminera. Manoro orinasa malaza eto amin'izao tontolo izao izy ary manampy amin'ny famahana ny olana maika, mametraka tanjona ary manatratra azy ireo.
Fatin'aretina - Side Effects
Fampiofanana amin'ny fiara ao an-trano
Ny gymnastics rhythmique tamin'ireo taona 80
Auto-fampiofanana ho an'ny fahavoazana
Fanazarana amin'ny vozony amin'ny osteochondrosis
Anna Kurkurina - fampiofanana mavesatra
Nahoana izy ireo no manakimpy ny masony rehefa manoroka izy ireo?
Ny fitsaboana ny aretina ao an-trano
Webinar, inona ary ahoana ny fandehany?
Fikitika Ischemika - vokany
Mialà amin'ny lanjany be loatra, ahalalana metabolista!
Sakafom-boasary an-trano - fofona malefaka amin'ny fofona manitra miaraka amin'ny fofom-boankazo
Fanomezana ho an'ny lehilahy 35 taona
Toe-karena ho an'ny tovovavy
Tranoben'ny hazo mafy
Ny fivoahan'ny lohataona ny fahavaratra